Expert Semalt - Atụmatụ Na Otu esi egbochi Google Site na ịnwapụta weebụsaịtị gị
Ịkwụsị engines ọchụchọ site na ịkọwapụta ebe nrụọrụ weebụ gị ruo nwa oge ruo mgbe ị gafeworo usoro mmepe bụ nke kachasị mkpa mgbe ọ na-abịa n'ahịa ahịa. Dịka onye nwe ụlọ ọrụ weebụ, ihe mgbaru ọsọ gị bụ isi nweta mkpokọta Google gị na ebe nrụọrụ weebụ ma bulie elu na algọridim ngwa ngwa o kwere mee.
Mgbe ị wụnye WordPress gị, ịkwụsị Google site na ịnwụpụta saịtị gị bụ ihe mbụ i kwesịrị ime - ventilatore da soffitto basso consumo pagamento sicuro. Oge mmalite nke ịmepụta mkpokọta weebụ gị nwere ike ịghọ ihe na-emebi emebi ma mebie ọganihu gị n'ọdịnihu na-arụ ọrụ dị ka onye na-azụ ahịa ahịa. Ihe mbu nke kpochapuru otutu ndi mmadu bu ihe ndi mmadu bu n'obi mgbe ha bidoro imeputa ihe ndi di n'ime ha na-acho uzo ahia ma na-acho bots na crawlers iji deputa ebe ha.
Olee otu ị si egbochi engines ịchọpụta ma kwụsị Google ka ị ghara ịnwụ na saịtị gị? Nke a bụ ajụjụ na-emetụta uche nke ọtụtụ webmasters.
Igor Gamanenko, onye ọkachamara kachasị si Semalt , na-enye ebe ụfọdụ ndụmọdụ na ntụziaka banyere otu esi egbochi engines ọchụchọ na Google site na ịwụrụ saịtị gị ruo nwa oge iji mee ka ebe nrụọrụ weebụ gị dị.
Iji paswọọdụ chebe saịtị gị site na cPanel
Mkpa ọ dị ichebe ebe nrụọrụ weebụ ọhụrụ gị na paswọọdụ na ịkwụsị Google site na ịkụnye ya nwere ike mesie ike nke ọma. Ịchọghị ka engines na-achọgharị gị na ebe nrụọrụ weebụ gị n'oge mmepe. Dịka onye nwe ụlọ ọrụ weebụ, ịnwere ike ịchekwa faịlụ ndekọ gị nke ọma site na cPanel dashboard. Ndị na-emepụta ntanetị weebụ dị ka Google enweghị ndekota ma nweta faịlụ ndekọ na-echebe site na paswọọdụ. Iji paswọọdụ-chebe faịlụ gị;
a) Malite akaụntụ cPanel ma họta 'Ihe Ntuziaka Chebe Ntuziaka'
b) Mepee akaụntụ gị 'Ụlọ ndekọ' wee pịa 'Gaa..'
c) Họrọ ebe ebe WordPress wụnye
d) Họrọ site na 'Paswọdu chebe ndekọ a' ma pịnye aha ndekọ ahụ ka echedo ya na igbe ọzọ. Pịa na bọtịnụ 'Save'
e) Mgbe ị natachara ihe ịga nke ọma, laghachi na dashboard ma mepụta aha njirimara na paswọọdụ. Pịa na 'gbanwee onye ọrụ ikike / gbakwunye' iji kwụsịtụ oge Google site n'igwu saịtị gị
Site na iji Robots.txt File iji gbochie engines ọchụchọ
Iji gbochie ndị ọzọ search engines na Google si na-arụ ọrụ ịkọwapụta na ebe nrụọrụ weebụ gị, jiri aka na-edepụta ma bulite faịlụ robots.txt gị na ndekọ nke saịtị gị ma kụziere engines ọchụchọ na Google ka ị ghara ịtọwa mkpokọta weebụ gị.
Nhọrọ ọzọ bụ iji njirimara inbuilt na WordPress arụnyere gị iji kụziere engines ọchụchọ ka ị ghara ịwa ebe nrụọrụ weebụ gị. Iji mezuo nke a;
a) Meghee vashboard WordPress gị wee pịa 'Ntọala,' wee họrọ 'Ịgụ.'
b) Họrọ 'Kwesie ike ịchọta engines ọchụchọ site na ịkọwapụta ebe nrụọrụ weebụ a' ma pịa 'Chekwaa Ngbanwe' iji gbochie njikwa engines niile site na ịwụrụ ebe nrụọrụ weebụ gị ruo nwa oge.
Paswọdu-chebe gị na ebe nrụọrụ weebụ iji WordPress ngwa mgbakwunye
Dịka onye na-elekọta weebụ, ị nwere ike iji ngwa mgbakwunye WordPress iji kwụsị Google site n'ịgbagharị na saịtị gị. Otú ọ dị, ọ bụ ihe amamihe dị na iji ngwa mgbakwunye agbakwunyere iji rụpụta nsonaazụ dị irè. Mee ngwa ngwa gị ma pịa 'Ntọala.' Malite ngwa mgbakwunye gị ma debe paswọọdụ ọhụrụ gị. Pịa bọtịnụ 'Save Changes' iji gbochie engines ọchụchọ site na ịnwụ na saịtị gị.
Ịdebe ihe ndekọ weebụ gị yana ndekọ nchekwa ya dị ezigbo mkpa mgbe ọ bịara ahịa dijitalụ . Ịchọta search engine nke Google site n'ịgba na ịkọwapụta ebe nrụọrụ weebụ gị na-enye gị oge zuru oke iji zụlite ya ma nweta data dị ọcha n'oge. Jiri ntuziaka ndị e depụtara n'elu iji kwụsị Google na engines ọchụchọ ndị ọzọ site na ịkọwapụta saịtị gị ruo nwa oge.